03 / 07 / 2021 03 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 351 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၃၁၀၈ Bandmates, 43112 Robo HipHop ကား, 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော, အဆောက်အဦး, ဒီဇိုင်နာများ, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Vidiyo, MOC သိကောင်းစရာများ, Tiago Catarino, ဗီဒီယို, YouTube ကို, YouTuber
ဥပမာတစ်ခုLego ဒီဇိုင်နာသစ်ကိုရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Lego VIDIYO ရိုးရှင်းသော Cadillac ပြုလုပ်နည်းအပါအ ၀ င်ပရိသတ်များသည်သူတို့ထံမှထွက်ခွာနိုင်သည့်အဆောက်အ ဦး ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာရန်နွေရာသီအစုံသည်။
Lego ဒီဇိုင်နာ YouTuber လှည့် Tiago Catarino ၏လတ်တလောအကွာအဝေးအားမိမိအာရုံကိုလှည့်ခဲ့သည် Lego VIDIYO၎င်းသည် single-minifigure BeatBoxes ကိုသာအာရုံမစိုက်စေဘဲပထမဆုံးသင့်လျော်သောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်မော်ဒယ်များကိုဆောင်ပုဒ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစုံနှင့်အတူအုတ်များနှင့်အချို့သောဝှက်ထားသောဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်နှင့်ဤအထောက်အကူဖြစ်စေ VIDIYO သူတို့ကိုသင်မှတစ်ဆင့်လမ်းပြရန်ဗီဒီယိုသည်လက်တွင်ရှိနေသည်။
အကြံပြုထားသောအကြံပြုချက်အချို့သည်အခြေခံအဆောက်အ ဦး များမှသာထွက်ခွာရန်မော်ဒယ်များ၏ဂီတနှင့်ရောင်စုံဒြပ်စင်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သော်ငြားကျယ်ဝန်းသည့်ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောနှင့် Cadillac တို့အားသင်၏သူနှင့်ထပ်တူထပ်မံပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်artအကြောင်းအရာ။ သူတို့ကယဉ်ကျေးလာကြ၏ 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော နှင့် 43112 Robo HipHop ကားကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ်သော ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ အညီ။
အစုံအတွင်းတွေ့နိုင်သည့် ပို၍ သိမ်မွေ့သောနည်းစနစ်အချို့တွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးပါဝင်သည် Lego သင့်အားရရှိနိုင်သောအုတ်များပေါ် မူတည်၍ လှေကားများ၊ သို့သော်တစ်ခုမှာအချို့သောနေရာများအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်သိုလှောင်မှုနေရာပေးသည် ကောင်လေး wizard?
p နည်းတဲ့သူတွေအတွက်artအပန်းဖြေသွားသောကြောင့်သေးငယ်သောမီးမောင်းထိုးပြသည့်အဆောက်အအုံ၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတောက်ပသောအလင်းရောင်ရှိနိုင်သည်။ Spider-Man in 76178 နေ့စဉ် Bugle.
ဒီဗီဒီယိုသည်တည်ဆောက်သူများအားဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းပါစေ၊ ရောင်စုံတီထွင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်သေးငယ်သောနည်းစနစ်များနှင့်အကြံပေးချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် Lego အတွေ့အကြုံ။ ဒီထဲမှာဖုံးကွယ်ရန်နောက်ထပ်ရှိသေးလျှင်ကျနော်တို့ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် လာမည့် VIDIYO set - ၄၃၁၀၈ Bandmates စီးရီး2။
← မှငါးအချိန် MarvelLEGO အစုံလိုအပ်သည့် Infinity Saga
အနာဂတ် LEGO Minecraft အသေးစားဓာတ်ပုံပြသရန်နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်း →